Chii chinonzi swap mu forex? | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi swap mu forex?
Vanhu vazhinji, kunyangwe avo vatove kudyara mumusika wemari, vasingazive izvo zvinoshandurwa mu forex chii. Iyo inozivikanwawo seanoshandura mapoinzi, chinjana makomisheni kana rollover mu forex. Kunyangwe ichokwadi kuti isingakanganise mashandiro e scalping kana intraday, imhosva yekurekodwa kana chinzvimbo chakaramba chakavhurika kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera. Kubhadharisa kunogona kuve mukuda kwako (ivo vanokubhadhara iwe) uye kupokana newe (iwe unobhadhara iko).
Kuverengera zvemari dzese uye mari yakakosha kune hupfumi hune hutano. Saka ngatione chii chinoshandurwa, kuti chinokukanganisa sei, kuti ungazvibatsire kana kuzvikuvadza sei, uye zvakanyanya kukosha, kuti chinja chinoverengerwa muiyo forex
1 Chii chinonzi chinjana?
1.1 Chinjana chinobva kupi mu forex?
1.2 Chinja / rollover mune broker
2 Iwe ungabatsirwa sei nekuchinjisa
3 Shanduko dzinoverengerwa sei mu forex?
4 Kugumisa kwekupedzisira
Chii chinonzi chinjana?
Vamwe vanhu vanozviti mari rollover. Kuchinja ndiko mutsauko pakati pemitero yemari yenyika mbiri. Zvingave zvakarurama kutaura ipapo, kuti ndiwo musiyano uripo pakati pemitero yemitero yenyika. Nekudaro, sezvo "mari yemaviri" ichibatwa mu forex, zviri nani kutaura kuti mutsauko uri pakati penyika mbiri. Idzi nyika mbiri dzakabatanidzwa mune yakatarwa mari vaviri vaviri.
Ichi kufarira kwegore, Inofanirwa kubhadharwa kune yega yega oparesheni yatinoramba takavhura kubva kune rimwe zuva kusvika kune rinotevera uye mazuva ese. Uye iripo nekuti mitengo yemubereko yekubhadhara nyika haina kufanana pakati pavo. Tine nzvimbo dzine mitengo yakadzika kwazvo uye isina kunaka, senzvimbo yeEuro (mari yeEUR), Switzerland (CHF mari) kana Japan (JPY mari), nedzimwe dzakakwirira, senge Russia (RUB mari). Kune zviitiko zvakasarudzika zvenyika dzine huwandu hwemari, senge Argentina. Vhura DataMacro, webhusaiti yandinokurudzira uye yandawanzo kushandisa kutarisa dhata kubva kune dzimwe nyika, iwe unozogona kuwana huwandu hwechido huripo nguva dzese.
Chinjana chinobva kupi mu forex?
Kubva mutsauko muhuwandu hwechimbadzo hweCentral Bank kunoenderana nemari imwe neimwe. Kuti tinzwisise, ngatitorei yeAustralia Dhora (AUD) uye iyo Swiss Franc (CHF) semuenzaniso. Pakati pevamwe, nekuti iyo AUD / CHF peya ndiyo yandiri kushanda zvakanyanya. Kwemakore angangoita maviri ndagara ndakavhura mashandiro ekutenga. Uyu muenzaniso ungangoita:
Rangarira kuti iyo mari yekutanga yemuchinjikwa wemari ndiyo mari yepasi, mune ino kesi AUD. Yechipiri ndiyo mari yemari, mune ino CHF.
AUD inoenderana nechimbadzo chemari inosvika 1%, uye CHF ine mwero we -50%. Musiyano wayo zvachose ndi 1’50-(-1’25)=2’75%. Izvi zvingave zvinofarira isu, kana vedu chinzvimbo chinotengwa. Kana, kune rumwe rutivi, tikatengesa, isu tichafanirwa kubhadhara mubereko uyu.
Kana, pane kudaro, takatora muchinjikwa neimwe nzira yakatenderedza (CHF / AUD) taizove nemusiyano we (-1'25) -1'50 = -2'75%. Naizvozvo, panzvimbo refu taizobhadhara chinjana ichocho, uye kana zvazotengeswa taizozvigamuchira.
Rangarira kuti kana iwe ukatenga mari yekutanga iwe unogashira yako kufarira, uye kana iwe ukaparadzana neyechipiri iwe unoibhadhara. Pane kudaro, kana ukatengesa, pamari yekutanga unobhadhara chimbadzo, uye pane wechipiri unochiwana.
Nharaunda dzekufarira dzinowanzosiyana nekufamba kwenguva Vamwe vakatsiga, vamwe havana kugadzikana (chenjera neizvi, hatidi zvinotyisa).
Parizvino, iwe unogona kuona iyo pfungwa kuseri kwekuchinja. Kana iwe ukatora mibairo yemari yemari inobatanidzwa muchinjikwa chega chega sereferenzi, iwe uchaona iyo yako broker inobhadhara kana kukubhadharisa iwe zvichienderana neyamakatarisa.
Chinja / rollover mune broker
Izvi zvakakosha. Iyo broker haitaure muzana, asi pane mapipi (mukuda kwako kana kupokana). Uye zvakare, iwe uchaona izvo haina kuenzana, chinzvimbo chakareba hachina kufanana nechinzvimbo chipfupi. Hazvifanirwe kunge zvakafanana here? Hongu, ichokwadi. Zvinoitika mune iyi nyaya ndizvozvo bhuroka anobhadharisa komisheni pane yega uye kune avo vanopa mari. Uye inofanira kunzwisiswa, nekuti ibhizinesi rako uye isu tinobatsirwa nemasevhisi ako.
Mune yangu kesi, broker wangu anondibhadharira chinzvimbo chakareba (Swap Long) muAUD / CHF, 0 pips pazuva. Zvino, kana ndikavhura pfupi nzvimbo (Shanduko Pfupi) ini ndaizobhadhara -44 mapipi pazuva. Kana pasina komisheni inobhadhariswa, isu pamwe taizoona chaiwo mapayipi manhamba, senge 0 uye -71'0,55 semuenzaniso, zvichienderana nekuti kwaive kutenga here kana kutengeswa.
Iwe ungabatsirwa sei nekuchinjisa
Chenjera, nekuti uyu munondo unocheka nekwose. Ndinotsanangura. Kekutanga nguva pandakava nepfungwa yekuchinjanisa, chishuwo changu chekutanga chaive chekuenda kutsvaga mari iyo yaizobhadhara mapipi mazhinji kuchengetedza nzvimbo yakavhurika. "Ini ndichasiya chinzvimbo changu chakavhurika ... Mazuva ese ini ndichakwenya mamwe mapipi ... Uye ini ndichave tenzi wepasi rese». Usatombofunga nezvazvo!
Unogona kuzvitsvagira wega kuti iyo makotesheni emari yemuchinjikwa ine dzakakwirira swaps mukufamba kwenguva. Kana iwe ukavatsvaga, izvo zvandinokurudzira kuti uite, iwe uchaona zvimwe magirafu anokutyisidzira iwe. Izvi zvinoreva here kuti isu tinofanirwa kukanganwa nezve kuchinjanisa? Kwete kwete, kure nazvo! Asi Ndiwo munondo unocheka nekwose, uye ndinofanira kukuyambira. Izvo zvido hazvisiyane nekuti zvinoita, asi ndiyo imwe nyaya.
Shanduko inogona kukubatsira iwe, kana kukubatsira iwe, pasina kuve vimbiso yekubudirira kuzere, mukuita sarudzo yekutengesa kwenguva refu.
Shanduko dzinoverengerwa sei mu forex?
Ngatimbofungidzirai kuti isu tinoda kuchinjanisa kutenga neEUR / USD, uye nekuchengeta manhamba ari nyore, ngatifungei kuti tinotenga mini-lot, yakaenzana ne10.000 USD.
Pombi yega yega, kana chii chakafanana, imwe neimwe 0'0001 yeiyo EUR / USD quote, yakaenzana ne $ 1.
Nharaunda dzekufarira muUSA dzakakwira kupfuura munzvimbo yeEuro.
MuUnited States, semuenzaniso, ivo vari 2% uye muEuro Zone 25% (Semuenzaniso, ini handisi kureva kuti izvozvi ndidzo).
Kana tichitenga EUR tinogamuchira 0%, uye apo isu patinoparadzanisa neUSD tinobhadhara 2%. Izvi zvinoreva kuti tichazobhadhara 25% pagore remadhora zviuru gumi. Zvakaenzana ne $ 2.
$ 225 pagore, ndiwo madhora 0 pazuva, ayo mumapipi aigona kududzira -62 mapipi. Negative nekuti mune ino kesi, ndizvo zvatinofanira kubhadhara. Uye nekuwedzera kuti broker ari kuzowedzera makomisheni, kukosha kwakakwira kunogona kubuda, kwe0 kana 62 pips.
Kuti mapipi / mapoinzi ekuchinjana aende mukutsigira kwedu, isu tinofanirwa kutengesa kunze kwekutenga, mune ino kesi.
Kana iwe ukashandisa imwe mari yemaviri, mapipi anogara achibhadharwa mari yakataurwa. Ipapo iwe unongofanirwa kuita shanduko kune yako mari, kuti uzive iyo chaiyo iyo mari yaunogamuchira.
Isu takaona kuti swap mu forex, ivo havana chakavanzika, kupfuura kwakakosha kuverenga uye kuziva kuti zvinotibata sei. Chii Inogona kutibatsira pamwe nekutikuvadza, zvichienderana nesarudzo dzedu. Uye icho chimwe chinhu chekuchengetedza mupfungwa, kunyanya mukureba-kwenguva forex mashandiro. Iyo zvakare yakaverengerwa kukosheswa kwesimbi senge goridhe nesirivha.
Kune mamwe zvakare ma broker anoshandisa swap mapoinzi se rollover yezvimwe zvinhu, zvinoshanda muCFDs. Chero bedzi tichienda kwenguva refu, isu tinofanirwa kutarisisa kune izvo zvemazuva ese zvatichazoburitsa yekuchengeta yakavhurika kutengeserana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Chii chinonzi swap mu forex?